RASMI: Kondogbia oo ku biiray Valencia – Gool FM
(Valencia) 21 Agoosto 2017. Naadiga Valencia ayaa dhammeytirtay saxiixa xiddiga qadka dhexe ee Inter Milan Geoffrey Kondogbia oo ay kula wareegtay hal sano oo amaah ah oo waliba leh dooq ay ku iibsan karto.
Heshiiska waxaa lagu xaqiijiyay warbixin ay kooxda reer Spain soo dhigtay boggeeda, iyadoo ay wararku soo jeedinayaan inay 25 milyan oo euro si joogta ah ugu iibsan karaan Kondogbia kal ciyaareedka xiga.
Inter Milan ayaa 31 milyan Monaco kaga soo iibsatay xiddiga reer France 2015-kii, wuxuuna u saftay 56 kulan labo sano uu la joogay.
Yeelkeede, waxaa loo arkaa inuu bandhigiisu aad uga hooseeyo wixii laga filanayay wuxuuna laacibka ka tagay tababarka ogolaansho la’aan si uu kooxda uu qasbo inay iibiyaan ama kooxda ka diraan.
Ku biiristiisa Valencia ayaa waxay ka walax tahay inuu markale dib ugu soo laabtay horyaalka La Liga maadaama uu la joogay Sevilla xilli ciyaareedkii 2012-13.
Marchisio oo doonaya inuu ka tago Juventus iyo Chelsea oo jiirada u taagan